Rasmi: Filimada Fanney Khan – Karwaan – Mulk todobaadka kowaad ganacsiga ay sameeyeen – Filimside.net
Rasmi: Filimada Fanney Khan – Karwaan – Mulk todobaadka kowaad ganacsiga ay sameeyeen
Sedexda filim ee masraxa ku cusubaa todobaadkii hore Fanney Khan, Karwaan iyo Mulk ma jiro mid ganacsi wacan sameeyay xitaa todobaadkiisa kowaad keenay waxayna sameeyeen ganacsi bur bur ku dheehan.
Fanney Khan oo ay hogaamiyaal ka yihiin Anil Kapoor, Aishwarya Rai Bachchan iyo Rajkumar Rao ayaaba ugu daran madaama hal todobaad Disaster ku noqday waayo miisaaniyad 35 Crore ayuu xambaarsan yahay wuxuuna keenay 9.35 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa kowaad.
Rishi Kapoor iyo Taapsee Pannu filimkooda Mulk wuu dadaalay wuxuuna keenay 11.30 Crore (Trade Figure) balse ganacsi ku filan ma ahan waqti badana ma heesto waayo todobaadkiisa labaad kaliya shan maalmood ayuu ka heestaa madaama laga bilaabo Arbacada (15 Aug) tiyaatarada la wareegi doono filimka weyn ee Gold.
Irrfan Khan, Dulquer Salmaan iyo Mithila Palkar filimkooda Karwaan ayaa ugu ganacsi wacnaa wuxuuna keenay todobaadkiisa kowaad 12 Crore (Trade Figure) weliba Koonfurta Hindiya ayuu ganacsi ahaan ku wacnaa.
Karwaan tiyaataro ku filan ma helin haddii uu masrax ku filan heli lahaa todobaadkiisa kowaad ganacsi wacan ayuu sameyn lahaa sidaa darteed siyaasad wanaagsan ma ahan in labo ama sedex filim halmar la isla saaro.
Waxaa Aqrisay 494